Wararka Maanta Archives - Page 3 of 545 - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Page 3
May 31, 2020 admin316
Qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka ah ayaa waxaa uu daqiiqado kahor uu ka dhacay duleedka Magaalada Muqdisho, kaasi oo jugtiisa laga maqlay xaafaddaha ku dhow halkaas, waxaana kasoo baxaya qaraxaas warar kala duwan. Dad goobjoogayaal ah oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa waxaa ay u sheegeen in qaraxaas uu sigaar ah uga dhacay inta […]
May 25, 2020 admin243
Wararka ka imanaya Gobolka Bay ayaa sheegaya in diyaarad sidday sahay gargaar maanta lagu rasaaseeyey degaanka Qansaxdheere xilli ay degaysay, sida ay VOA Somali ku heshay warar kala duwan. Diyaaradda ayay ku dhacday rasaas fudud, waxaana la sheegay in diyaaraddu ay markii dambe kasoo kacday Qansaxdheere isla markaana ay kusoo laabatay Muqdisho. Ilaa hadda ma […]
May 20, 2020 admin401
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax miino oo saaka ka dhacay degmada Hodan ee Gobolka Banaadir, waxaana qaraxaas lala eegtay gaari ciidan uu watay General Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed. Qaraxa ayaa gaariga lagula eegtay agagaarka Isgoyska Banaadir, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac sida saraakiisha […]
May 17, 2020 admin401
Maamulka Somaliland oo fasaxay Qaadka
May 17, 2020 admin360
Warqaddan oo ka soo baxday xafiiska Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Somaliland Cabdiraxaan Saylici ayaa lagu fasaxay in Qaadku si caadi ah u yimaado deegaanada maamulkaas. Fasaxan ayaa ka bilaabanaya maanta 17 May 2020, waxaana la faray dadka Qaadka ka shaqeynaya inay raacaan tilmaamaha ku qoran warqadan si looga hortago in cudurka Carona ku faafo bulshada […]
May 16, 2020 admin407
Taliyihii hore ee Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA C/llaahi Maxamed Cali (Sanbalolshe) ayaa ka hadlay gabadhii lahaystaha Talyaaniga aheyd Silvia Romano oo 25 sano-jir ah oo 9 bishan May ay siidaayeen Ururka Al-Shabaab, 18 bilood oo afduub loo heysatay, kadib markii ay ka soo qafaasheen bishii November 2018 degmada Chakama ee xeebta ku […]
May 16, 2020 admin286
Garoonka diyaaradaha Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Somaliland ayaa Maanta oo sabti waxaa ka degtay diyaarad sida qalab Caafimaad oo looga talagalay Cudurka halista ah ee Coronavirus oo saameeyn ku yeeshay aduunka oo dhan. Diyaaradaan ayaa waxaa ay ka timid wadanka Qatar, waxaana la sheegay inay wado qalab Caafimaad oo ay Qatar ugu deeqay Soomaaliland, kuwaas […]
May 16, 2020 admin411
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa soo dhameystiray Golihiisa Wasiirada, isagoo xalay magacaabay 25 Wasiir ku xigeen iyo 11 Wasiiru Dowle, dabayaaqadii bishii hore ayuu magacaabay 25 Wasiir, waxaana tirada guud ee Golaha Wasiiradu noqonaysaa 61 xubnood, waana xukuumaddii ugu tirada Badneyd ee ay Galmudug yeelatay. Sidoo kale Dhismaha xukuumadan ayaa qaatay in ka badan […]
May 11, 2020 admin233
Guddiga Gurmadka Beleweyne ayaa 7-dii bishan idaacadda VOA u sheegay in lacag gaareysa $600,000 oo ay dowladdu Jabuuti ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu saameeyeen aanay iyagu soo gaarin. Dowladda Jabuuti ayaa xaqiijisay in lacagtaasi ay 7 bilood ka hor ku wareejisay wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta musoobooyinka Dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi […]
May 11, 2020 admin577
Sida lagu daabacay warbaahinta Talyaaniga oo xiganeysa ilo Amni Hay’adda Sirdoonka Qaranka ee Turkiga (MIT) ayaa gacan ka geysatay soo badbaadinta shaqaale samafal Talyaani ah oo la afduubay oo ku sugnaa Soomaaliya. Silvia Constanza Romano, oo 25 jir, ayaa laga afduubay magaalada xeebta ku taal koonfur-bari ee Chakama ee Kenya bishii November 2018. Warbaahinta Talyaaniga […]